Phone Library ngwa, nke e bipụtara nefu na Google Play na-arụsi ọrụ ike na-eji ihe karịrị 10 puku ọrụ taa, awade a mfe akwụkwọ ọgụgụ gburugburu ebe obibi. Mepụtara na mmekorita ya na Türk Telekom na Mahadum Boğaziçi Technology na Education Laboratory maka ndị ahụ na-adịghị ahụ anya, obere oge GETEM, ọbá akwụkwọ ekwentị na-aga nihu na-eju...
Apple, otu nime ụlọ ọrụ teknụzụ kachasị ukwuu nụwa, na-aga nihu na-eme mkpọtụ na ụwa teknụzụ na ngwaahịa dị iche iche ọ na-ebupụta kwa afọ. Ụlọ ọrụ ahụ, bụ nke jikwa ngwanrọ ọ na-emepụta yana ngwaahịa teknụzụ ya meere onwe ya aha, na-enye ndị ahịa ya usoro ịgụ akwụkwọ. Ngwa ọhụrụ a akpọrọ Apple Books, enwere ike iji nasụsụ dị iche iche....
Mkpokọta mbibi bụ egwuregwu nka na-atọ ụtọ nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Ị nwere ike ịnwe oge dị ụtọ na egwuregwu ahụ nke na-eme ka mkpọsa ụlọ ghọọ ihe na-atọ ụtọ. Ebumnuche gị negwuregwu ahụ bụ ibibi ụlọ ndị e wuru site na ngọngọ ị ga-ahụ nihu gị. Maka nke a, ị ga-eji bọmbụ ndị enyere gị. Ma ebe ọ bụ na...
Tank Recon 2 bụ agha na nka egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Enwere m ike ịsị na ọ bụ ihe na-esote Tank Recon, egwuregwu na-ewu ewu nke ndị ọrụ nde ise ebudatara. Tank Recon 2 bụ egwuregwu na-atọ ụtọ ma na-eri ahụ nuche m. Ebumnuche gị na egwuregwu ahụ bụ ijikwa tank gị wee bibie tankị na ụgbọ elu ndị...
Draw Slasher bụ egwuregwu nka ị nwere ike ibudata ma kpọọ na ngwaọrụ gam akporo gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji oge efu gị na ihe na-atọ ụtọ ma ka ọ dị ugbu a ịchọrọ ikpochapụ uche gị, ị nwere ike ịnwale Draw Slasher. Ị na-egwu ninja na-agbachitere obodo ya dịka isiokwu nke egwuregwu ahụ si dị. Enwe Zombie, ndị ohi zombie, enwe pirate, enwe...
World of Pool Billiards bụ egwuregwu ọdọ mmiri Android ị nwere ike ịnụ ụtọ noge ezumike gị. Nime egwuregwu ahụ, nke nwere injin physics na-aga nke ọma, mmegharị bọọlụ bụ kpọmkwem ka ịchọrọ ya. Ịkwesighi igosi mmeghachi omume nke bọọlụ ị kụrụ ma ọ bụ ka o si aga ebe ahụ. Ewezuga nke ahụ, enwere m ike ịsị na ọ dị mma na njikwa ya na...
Ime Anwansi: Ọkachamara maka Hire na-adọta uche dị ka egwuregwu nka imikpu anyị nwere ike igwu na ngwaọrụ anyị nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo. Egwuregwu a, nke a na-enye kpamkpam nefu, na-enye usoro na-adọrọ mmasị. Nezie, ọ dịghị mfe ịhụ egwuregwu nkà dị otú ahụ. Na Magic Touch: Ọkachamara maka Hire, nke na-ahọrọ ịga nihu nahịrị mbụ...
Pukka Golf bụ egwuregwu ikpo okwu mkpanaka nwere egwuregwu dị ngwa ma na-atọ ụtọ. Onye dike anyị bụ bọọlụ gọlfụ na Pukka Golf, egwuregwu gọlfụ nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị gị na mbadamba ụrọ site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ isi negwuregwu ahụ bụ itinye bọọlụ gọlfụ anyị nime oghere. Ma ọrụ...
Emetụla Triangle nwere ike ịkọwa dị ka egwuregwu nka nke anyị nwere ike igwu na ngwaọrụ gam akporo anyị. Na egwuregwu a, nke anyị nwere ike ibudata kpamkpam nefu, anyị na-agbalị ịga nihu ruo nókè o kwere mee na-emetụghị ogwu ndị gbasasịrị na mgbidi. Mgbe mbụ anyị banyere egwuregwu ahụ, anyị na-ezute interface dị oke mfe. Atụla anya ihe...
Hop pụtara dị ka ngwa ozi na-arụ ọrụ nke anyị nwere ike iji na mbadamba Android na smartphones anyị. Nihi ngwa a, nke a na-enye kpamkpam nefu, anyị nwere ike ịkparịta ụka ma kparịta ụka na ndị anyị chọrọ ịkparịta ụka site na email. Ebumnuche bụ isi nke ngwa a bụ ịgbanwe adreesị ozi-e anyị ka ọ bụrụ ọrụ izi ozi ozugbo. A na-edobe ozi-e...
Mikey Boots bụ egwuregwu ịgba ọsọ na nka ị nwere ike igwu na ngwaọrụ gam akporo gị. Enwere m ike ịsị na aha egwuregwu ahụ na-akọwa nke ọma nihi na ihe abụọ dị mkpa nke egwuregwu ahụ bụ Mikey na akpụkpọ ụkwụ ya. Ebumnuche gị negwuregwu ahụ bụ ịga nihu site nịgba ọsọ site naka ekpe gaa naka nri dị ka egwuregwu na-agba ọsọ. Mana oge a, ị...
Oge ụlọ mposi bụ otu egwuregwu gam akporo na-enyere gị aka inwekwu anụrị na ụlọ mposi na ọ bụ mmepụta ewu ewu netiti egwuregwu mposi. Na egwuregwu nke Tapps mepụtara, mgbe ụfọdụ, anyị na-emeghe ụlọ mposi mechiri emechi na mgbapụta, mgbe ụfọdụ anyị na-agbalị ime ụlọ mposi nke ọchịcha na-egbuke egbuke, na mgbe ụfọdụ anyị na-enyere nwoke...
Bing Bong nwere echiche egwuregwu dị mfe; mana egwuregwu nka mkpanaka nke na-enye ahụmịhe egwuregwu na-eri ahụ. Na nke a obere na fun nka egwuregwu na ị nwere ike ibudata na-egwu kpam kpam free na gị smartphones na mbadamba iji gam akporo sistemụ, anyị bụ isi na-agbalị iji nweta kasị elu akara site ijikwa a green bọọlụ. The isi mgbagha...
Enwere ike ịkọwa Au dị ka egwuregwu nka nke anyị nwere ike ibudata kpamkpam nefu na ngwaọrụ gam akporo anyị. Nime egwuregwu ahụ, nke na-adọta uche na nhazi ya dị ụtọ ma dị mfe, anyị na-agbalị imezu ọrụ nke dị mfe ma na-eme ka ọ sie ike ma a bịa nomume. Ihe anyị ga-emezu negwuregwu ahụ bụ ịnakọta bọọlụ ndị na-efega elu site na ala ihuenyo...
Nnukwu anụ akwụkwọ bụ egwuregwu na-atọ ụtọ ma mara mma nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ na ngwaọrụ gam akporo gị. Ọ bụrụ na ị na-atụ uche ụbọchị Atari ma chọọ ịlaghachi noge nwata gị mgbe ị nwere ike igwu Super Mario, mana ịchọrọ ịnwale ihe ọhụrụ, Monsters akwụkwọ nwere ike ịbụ egwuregwu ị na-achọ. Nnukwu anụ akwụkwọ bụ egwuregwu ikpo...
Ụlọ ahịa Burger bụ egwuregwu na-eme hamburger nke anyị nwere ike ibudata kpamkpam nefu na ngwaọrụ anyị na sistemụ arụmọrụ gam akporo. Negwuregwu a ebe anyị na-agba ọsọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ anyị, anyị na-agbalị ịnye iwu sitere naka ndị ahịa anyị kpamkpam na nụzọ ziri ezi. Enwere ọrụ 80 na egwuregwu ahụ. Ndị a bụ ụdị ọrụ nke ọ bụghị onye ọ...
Blobb, egwuregwu nka kwụ ọtọ maka gam akporo, bụ ọrụ pụrụ iche nke anyị na-ejikwa agwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na obere apịtị. Mgbe ị na-eje ije na labyrinths, ị ga-akpachara anya megide ọnyà dị ize ndụ ma rute kuki kpakpando na ọkwa. Egwuregwu a, nke ebudatara nefu, nwere nkeji iri anọ na ise nefu. Mgbe nke ahụ gasịrị, ịkwesịrị iji...
Wooshme bụ egwuregwu nka na-atọ ụtọ ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Onye nrụpụta Turkey mere, egwuregwu ahụ ga-abanyekwa na akwara gị wee mee ka ị riri ahụ. Wooshme bụ egwuregwu na-atọ ụtọ nke ị nwere ike igwu noge ohere gị, mgbe ị na-eche ụgbọ ala, netiti nkuzi ma ọ bụ mgbe ị nwere obere ezumike. Enwere m ike...
Ọ bụ ngwa Windows 8 gọọmentị Dominos Pizza, yinye pizza nnyefe ụlọ kachasị nụwa nwere alaka 1000 gburugburu ụwa. Site na ịwụnye ngwa, nke dabara na mbadamba ma kọmputa, ị nwere ike ịtụ ngwa ngwa na-emegheghị ihe nchọgharị ịntanetị gị. Site na ngwa Windows 8 gọọmentị Dominos Pizza, ị nwere ike họrọ menu gị ngwa ngwa wee tinye usoro gị. Ị...
Egwuregwu vidiyo Mc Donald bụ egwuregwu pụrụ iche nke na-eweta echiche dị iche na ụwa egwuregwu dị iche na egwuregwu ndị ọzọ. Nihi na; Ebumnuche nke egwuregwu a abụghị ịzụlite atụmatụ agha ma ọ bụ imeri nọsọ. Ebumnuche nke egwuregwu a bụ ijikwa ụlọ ọrụ! Kedu ka otu ụlọ ọrụ a ma ama nụwa dị ka Mc Donalds, nke bi na ahịa, si dị elu, kedu...
Burger King bụ ngwa Burger King gọọmentị na-enye ndị ọrụ ohere iji ngwaọrụ mkpanaka tinye iwu ngwa ngwa wee nweta ihe nrite site na igwu egwuregwu na-atọ ụtọ. Ngwa Burger King, nke ị nwere ike ibudata ma jiri nefu na ekwentị gị na mbadamba ihe site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, na-enye gị ohere ịtụ site na Burger King Center site na...
Graviturn pụtara dị ka egwuregwu nka na-atọ ụtọ nke anyị nwere ike igwu na ngwaọrụ anyị na sistemụ arụmọrụ gam akporo. Iji nwee ihe ịga nke ọma na egwuregwu a, nke a na-enye kpamkpam nefu, ọ ga-ezuru ịgbaso iwu ole na ole. Mana emebere iwu ndị a nke ukwuu nke na ha na-akwali nkà nke ndị egwuregwu na oke ha. Ebumnuche anyị bụ isi...
Winter Walk bụ egwuregwu nka na-atọ ụtọ nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Nadịghị ka egwuregwu ịgba ọsọ na-adịghị agwụ agwụ, otu nime ụdị egwuregwu nka kachasị ewu ewu, na Winter Walk, nke bụ egwuregwu ije, ị na-anwale nkà ịga ije na snow na ifufe. Enwere m ike ịsị na akụkụ kachasị mkpa nke Winter Walk bụ ụdị...
Zen Pinball pụtara dị ka egwuregwu pinball na-atọ ụtọ nke anyị nwere ike ịkpọ kpamkpam nefu na mbadamba na smartphones nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo. Agbanyeghị na a na-enye ya nefu, Zen Pinball na-enye ikuku dị mma yana ikuku nke ndị egwuregwu afọ niile nwere ike ịnụ ụtọ ya. Mgbe mbụ anyị banyere egwuregwu ahụ, nkọwa ndị dị netiti...
Optical Inquisitor bụ egwuregwu nka ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Sniping na-abụkarị otu nime ụdị nke onye ọ bụla hụrụ egwuregwu agha nanya. The Optical Inquisitor dabarakwa na ngalaba a. Ma egwuregwu ahụ, nke nwere akụkọ dị egwu, na-eme na 1980 ma enwere m ike ịsị na ọ nwere ọnọdụ dị iche. Nihi egwuregwu...
Major Magnet bụ egwuregwu na-atọ ụtọ ma dị iche iche nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Echere m na Major Magnet, nke na-adọta uche na usoro egwuregwu mbụ ya, ga-akpọrọ gị gaa noge egwuregwu. Mgbe ịmepe egwuregwu ahụ maka oge mbụ, igwe egwuregwu na mkpụrụ ego na-apụta na mbụ. Ị na-amalite egwuregwu ahụ site na...
Nightbird Trigger X, nke ewepụtara ndị egwuregwu dị ka egwuregwu dị mfe nghọta dabere na akụkọ ndabere dị mfe, chọrọ ka ị gbanarị nwoke na-achụ gị. Iji merie onye iro na-abịa nazụ gị, ị ga-ebibi ihe ịchọ mma ndị gbasasịrị na map site na-agbapụ. Nke a na-ebelata ike na iru onye iro gị. Egwuregwu ahụ nwere eserese ya pụrụ iche na-emepụta...
Ice Cream, egwuregwu ụmụaka na ndị okenye, bụ egwuregwu gam akporo gam akporo ebe ị nwere ike ichere site na ice cream guzoro wee wepụta iwu ahụ nke ọma wee bulie elu. Ọ dị ezigbo mkpa iji hụ na afọ ojuju ndị ahịa na egwuregwu ebe ị ga-eme ngwa ngwa kwadebe ihe mgbagwoju anya ice cream nke ndị ahịa chọrọ site nichere na ice cream stand....
Adventurer Bird bụ egwuregwu nka nke ndị na-achọ egwuregwu dị ka Flappy Bird nwere ike ịnụ ụtọ igwu egwu ma gbalịa imeri ihe mgbochi dị iche iche. Flappy Bird, egwuregwu ewepụrụ nahịa site naka onye nrụpụta ya ka obere oge njem ya, kpochapụrụ ụwa egwuregwu mkpanaka. Mmepụta a, nke metụtakwara ọtụtụ egwuregwu mgbe ọ gachara, yiri ka ọ...
Enwere ike ịkọwa mmiri Ninja dị ka egwuregwu nka nke anyị nwere ike igwu na mbadamba nkume na ekwentị anyị nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo. Ketchapp chepụtara, egwuregwu a na-eme ka ndị mmadụ rie ahụ dị ka egwuregwu ndị ọzọ nke onye nrụpụta. Na mmiri Ninja, nke na-emechi ndị egwuregwu na ihuenyo na ọchịchọ nke ọdịda, anyị na-achịkwa...
Jump Car na-adọta uche dị ka egwuregwu nka siri ike nke anyị nwere ike igwu na ngwaọrụ anyị na sistemụ arụmọrụ gam akporo. Asụsụ imewe retro a na-eji na egwuregwu a, nke a na-enye kpamkpam nefu, na-ebuli ọkwa ụtọ egwuregwu ahụ. Otú ọ dị, e nwere usoro na-akpasu iwe nokpuru ihu ya yiri ka ọ mara mma. Nime egwuregwu ahụ, a na-enye ụgbọ ala...
Flowerpop Adventures bụ ihe egwuregwu na-atọ ụtọ ma mara mma na egwuregwu nka bịarutere na ngwaọrụ gam akporo gị. Ebumnuche gị negwuregwu ahụ bụ ịtụba squirrels na okooko osisi gbasasịrị na ihuenyo wee kpokọta ha niile. Anyị niile maara na enwere ọtụtụ egwuregwu nke ụdị a ugbu a, yabụ anyị na-achọ ndịiche. Ọ bụ ezie na Flowerpop...
Nọrọ na Circle bụ otu nime egwuregwu nka bidoro bụrụ ewu ewu noge na-adịbeghị anya. Ihe Turkish pụtara nọrọ na Cricle, nke pụtara ìhè maka ndị egwuregwu Turkish dịka ọ nwere nkwado asụsụ Bekee na Turkish, nọ na gburugburu. Ebumnuche gị negwuregwu ahụ bụ ịgbalị ime ka obere bọọlụ na-aga nihu na nnukwu okirikiri na gburugburu site na...
Akadon bụ egwuregwu nka dị mfe mana ọ na-atọkwa ụtọ nke ndị nwe ngwaọrụ mkpanaka gam akporo nwere ike igwu egwu. Ihe mgbaru ọsọ gị na egwuregwu ahụ bụ ịgbanwe agba nke ngalaba dị na ala ihuenyo site na ịṅa ntị na agba nke obere oghere ndị na-abịa site nakụkụ elu nke ihuenyo ahụ. Nikwu ya nụzọ ọzọ, ọ bụrụ na enwere obere oghere akwụkwọ...
Dot Rain bụ egwuregwu gam akporo na-atọ ụtọ na nke efu ebe ị ga-adaba nụzọ ziri ezi ntụpọ na-abịa site nelu ihuenyo dị ka mmiri ozuzo na ntụpọ na ala nke ihuenyo. Egwuregwu a, nke onye nrụpụta ngwa mkpanaka Turkish bụ Fırat Özer kwadebere, bụ egwuregwu ga-eme ka ị nwee anụrị nagbanyeghị atụmatụ ọgbara ọhụrụ na nke mara mma yana usoro ya...
Madfist bụ egwuregwu reflex na nka nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Madfist, nke nwere usoro egwuregwu dị iche, bụ otu nime egwuregwu ndị a na-amaghị uru ma hapụ ya. Ọ bụrụ na anyị eme ntụnyere, enwere m ike ịsị na Madfist yiri Flappy Bird. Ozugbo ị nwetara aka gị na Madfist, nke bụ egwuregwu na-akụda mmụọ...
Jelly Jump pụtara dị ka egwuregwu nka na-atọ ụtọ ma na-emikpu nke anyị nwere ike igwu na ngwaọrụ gam akporo anyị. Mgbe anyị banyere egwuregwu a, nke a na-enye kpamkpam nefu, anyị na-ezute interface nke e ji ihe ngosi dị elu chọọ ya mma. Ụdị nzaghachi ihe omume bụ nke a haziri nke ọma. Nkọwa ndị a na-ewere echiche dị mma nke egwuregwu ahụ...
Bounce pụtara dị ka egwuregwu nka immersive nke anyị nwere ike igwu na ngwaọrụ gam akporo anyị. Mgbe anyị banyere egwuregwu a, nke a na-enye kpamkpam nefu, anyị na-ezute interface nke ejiri nghọta dị mfe ma nụchaa. A na-ejikwa usoro na-eri ahụ mana na-akpasu iwe nke anyị na-ahụ na egwuregwu Ketchapp ndị ọzọ na egwuregwu a. Ebumnuche anyị...
Ịtụfe Knife Deluxe bụ egwuregwu nka mkpanaka nke nwere ike inye gị oge na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale nkà gị. Na-atụba Knife Deluxe, a mma-atụba egwuregwu na ị nwere ike ibudata na-egwu free na gị smartphones na mbadamba iji gam akporo sistemụ, anyị bụ isi na-agbalị iji nweta kasị elu akara site na-eziga knives na lekwasịrị anya....
Pivot bụ egwuregwu gam akporo gam akporo na-eri ahụ ma na-atọ ụtọ nke ekwentị gam akporo na ndị na-egwu mbadamba mbadamba kwesịrị igwu ya bụ ndị na-adabere nịdị nkọ na ntụgharị uche ha. Ebumnuche gị negwuregwu ahụ bụ ịgbalị inweta akara kacha elu site na iri ntụpọ niile. Ọdịdị egwuregwu ahụ bụ otu egwuregwu ochie a na-akpọ agwọ ma ọ bụ...
Survivor Celebrities and Volunteers APK bụ egwuregwu mkpagharị mkpanaka nke ị nwere ike ịmasị gị ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị ikiri asọmpi Survivor na TV. Budata Survivor APK Nke a egwuregwu Survivor Celebrity vs Volunteers, nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị gị na mbadamba gị site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, na-enye gị...
Star Wars Pinball 3 pụtara dị ka egwuregwu bọọlụ anyị nwere ike igwu na ngwaọrụ gam akporo anyị. Ugbu a, anyị nwere ohere igwu egwu pinball, nke bụ otu nime ihe ndị dị mkpa nke egwuregwu na ụlọ ịgba egwu, na ngwaọrụ mkpanaka anyị, yana isiokwu Star Wars! Mgbe mbụ anyị banyere egwuregwu ahụ, anyị na-ezute interface nwere ọmarịcha ihe...
rr bụ otu nime egwuregwu ndị ị ga-ebudata ma gbalịa nefu ma ọ bụrụ na ike gwụrụ gị maka egwuregwu ị na-egwu noge na-adịbeghị anya ma na-achọ egwuregwu ọhụrụ ma ọ bụrụ na-amasị gị egwuregwu nkà. Enwere m ike ịsị na rr, nke nwere egwuregwu 8 na mkpokọta na ha niile nwere aha ndị yiri ya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụdị egwuregwu ahụ,...
rl bụ egwuregwu nke asaa nusoro egwuregwu asatọ nke yiri ibe ya mana nke ọ bụla nwere ebumnuche dị iche. Ọ bụ ezie na a na-eji otu atụmatụ na usoro egwuregwu na usoro egwuregwu ndị ọzọ, nke mejupụtara aa, uu, ff, rr, ao, rl, sp na th egwuregwu, ị nwere ọrụ dị iche iche na egwuregwu ọ bụla. Ka ị na-aga nke ọma na egwuregwu rl, nke nwere...
ao pụtara dị ka ihe na-eri ahụ nka egwuregwu na anyị nwere ike igwu na anyị gam akporo ngwaọrụ. Anyị na-agbalị ịrụ ọrụ nke yiri ka ọ dị mfe na egwuregwu a, nke a na-enye kpamkpam nefu, ma mgbe ịmalitere ya, ọ na-apụta na ọ bụghị ma ọlị. Isi ọrụ anyị negwuregwu ahụ bụ ikpokọta bọọlụ na okirikiri na-atụgharị na etiti. Bọọlụ ndị na-abịa...
uu pụtara dị ka egwuregwu nka na-eri ahụ nke anyị nwere ike igwu na mbadamba Android na smartphones m. Uu, nke nwere usoro egwuregwu na-atọ ụtọ, nwere echiche imewe pere mpe. Mmetụta ụda nke na-arụ ọrụ kwekọrọ na ihe ndị a na-ahụ anya bụ otu nime ihe ndị na-eme ka egwuregwu ahụ dịkwuo ụtọ. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ isi negwuregwu ahụ bụ...
sp bụ egwuregwu nka Android na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ nke ị ga-ejikọ ntụpọ site na ala ihuenyo gaa na nnukwu bọọlụ dị netiti yana ahịrị. SP, nke dị na ụdị egwuregwu mgbagwoju anya, bụ egwuregwu nke asatọ nke usoro egwuregwu nke otu ụlọ ọrụ mmepụta ihe mepụtara notu ụzọ ahụ. aa,uu,ff,rr etc. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke nwere egwuregwu na...
Enwere ike ịkọwa th dị ka egwuregwu nka na-eri ahụ nke anyị nwere ike igwu na ngwaọrụ anyị na sistemụ arụmọrụ gam akporo. Egwuregwu ahụ, nke nwere usoro egwuregwu na-atọ ụtọ, nwere asụsụ nhazi dị oke mfe. Mmetụta ụda nke na-arụ ọrụ kwekọrọ na ihe ndị a na-ahụ anya bụ otu nime nkọwa ndị na-agbakwụnye obi ụtọ na egwuregwu ahụ. Ebumnuche...